Jenareta Monitoring - Shenzhen Joint Technology Co., Ltd
Base jenareta oparesheni hurongwa ndiyo Integrated Management mamiriro raikura pamusoro nezuva mashandiro nzira, chinosanganisira zvinhu zvakafanana jenareta chaiyo nguva mamiriro uye aramu zvichiongororwa, kuvhiyiwa nzira zvakanaka, mashandiro vashandi utariri, zuva Nokuraramisa zvakanaka, rakakura kugadzira zvakanaka, nenhumbi utariri, uye zvinokosha mashoko zvakanaka, etc.
Jenareta Status Monitoring:
Real nguva chawo kushanda chinzvimbo uye okuzvidzivirira zvichiongororwa, kutsigira chikuru kuzvidzora ukomba, inotsigira kusvika 37 chinzvimbo uye 18 okuzvidzivirira zvichiongororwa
Maintenance uye Major rokugadzira zvichiitwa utariri
Maintenance uye Entry: Kana Nokuraramisa paakapedza, mashoko anogona kupindwa Via Mobile uye Upload rakanga rakundwa mifananidzo kuti pakati, kana anogona kupindwa nevanhu akasarudzwa munhu PC kana kudzokera hofisi
Rongai mwedzi unotevera
Plan kwakaita Auditing
Plan kwakaita vachizvitumira
Executive muviri rechengetedzo nehoro
Overhaul kugadzira dzaishandiswa
Mushure kurapwa kwapera, fekitari kunyoresa
Jenareta anoendeswa fekitari kunyoresa uye kugadzira
Repair urongwa utariri
Alarm Kutarisira: Kana aramu akaparirwa, aramu vachange pakarepo akatuma preset Mobile kubva vatungamirire, mainjiniya, uye mukoti, kuti vaudzei nechigadziko ruzivo inokosha, jenareta mamiriro, zvinobvira vainyeperwa, uye akakodzera mashoko, kana vashandi vanogona tokurumidza uye zvakarurama.
Job Entry: Mushure nhokwe kugadzira, kuti vagadzirise zvinhu zvinogona akapinda kubva Mobile Anwendung, uye Upload pamwe akabatwa mifananidzo; kana akapinda ne akasarudzwa pachake ari kombiyuta kana shure kuhofisi.
Dzinobhururuka Repair Report: All nhokwe kugadzira nhoroondo mushumo zvinogona kuongororwa sezvo pazuva, pavhiki, kana pamwedzi, mushumo inogona kunotangira kuti vatengi.
Nokuti kugadzirwa kudarika yakatarwa, pachava tsvuku hunhu akaratidza.
Date ongororo: The Hurongwa anogona kuongorora nhokwe kugadziriswa ose mwedzi, rinosanganisira nguva yaaipedza, nenhumbi kutsiviwa, chiteshi nzvimbo rokugadzira kakawanda, uye jenareta makore mubasa, etc.